Featured Nhau - Iyo UnCommission
Vatauri venhau vari pamoyo weCommission. Inzwa zvakananga kubva kune vechidiki kuyambuka United States nezve ruzivo rwavo pachavo neEMEM kudzidza.
Izvi zvinotevera sampuro diki yezvatiri kunzwa kuburikidza nazvo iyo UnCommission uye ichagadziridzwa nguva nenguva.
Dr. C's 6th Giredhi Sainzi Kirasi
Peyton (iye / wake), 23, Louisiana
"Ndinotenda Dr. C nekundisuma kuSainzi nenzira inoshanda…Izvo zvakasimbisa pfungwa mumusoro mangu yekuti ndaizoenderera mberi nebasa rangu resainzi, uye ndaizodzidza maitiro nyika inoshanda."
Taina (iye / wake), 20, Florida
"Kutyaira uku kuchiri mumoyo mangu nhasi uye kunondikurudzira zuva nezuva kuti ndive mudzidzisi wekugadzira anogona kuzivisa vanhu nezvekuchinja kwemamiriro ekunze, ndichivapa simba nemhinduro kuchinangwa chedu chekugara munzvimbo iri nani."
Chiitiko changu neSTEM
Gabrielle (iye / wake / ivo / ivo), 22, Texas
"Kunyange zvazvo mudzidzisi weSTEM akamboparadza rudo rwangu rwesainzi, aingova mumwe mudzidzisi weSTEM akakwanisa kukudziridza rudo rwangu rwesainzi kubva kuupenyu."
Kushaya huropi hwemasvomhu
Elena (iye / wake), 22, New York
“Hachisi chinhu chinobaya muuropi hwangu. Handina njere dzemasvomhu.”
Ephraim (iye/iye/wake), 18, Texas
“Mudzidzisi uyu aive nyanzvi. Handifi ndakamukanganwa nokuti ane simba guru muupenyu hwangu.”
Yazmine (iye/her/hers), 16, Arizona
“Ndinofunga nezvepurojekiti yangu yegiredhi rechinomwe chero nguva yandinenge ndichienda kumakirasi angu esainzi… ndaisanzwa ndiri kurereka uye ndaifunga kuti ndaisafanira kuvapo. Aka kaive kekutanga kunzwa kuti zvese zvine nzvimbo uye zvakarongeka. "
Alexis (iye / wake), 25, New York
“Kumiririra kungave kuri nyore chikamu. Tinokwanisa kupinza vanhu musuwo, toita kuti vanhu vauye, toita kuti vanhu vanzwe nyaya dzedu, towana vanhu muSTEM, tinogona kuwana vanhu vesainzi, tech, engineering nemasvomhu, asi tingavasvitsa here. kugara?”
Musikana Mukugadzira Mutambo
Daijya (iye / wake), 18, Missouri
“Ini ndiri mukadzi ane ruvara anoenda kumunda usingagamuchirwi nevakawanda kana kutombobvumwa.
Kushandura musikana kuita mukadzi wesainzi
Jordan (iye / wake), 21, Texas
“Ndinoyeuka kuti mudzidzisi wangu wesainzi mugiredhi rechitanhatu akauya nemvura yakachena kubva muchitubu chaakanga ashanyira kuti mudzidzi wose wekirasi aedze kana vachida… nenzira yazvaigona.”
Mariam (iye / wake), 22, California
“Uye akati, 'Zvakanaka, zano rangu kwauri nderekuti usiye kirasi yangu, nokuti haisi yako, hausi wekirasi yangu, unofanira kuenda kukirasi yesvomhu yakaderera.' ”
Kuva Munhu Anoshanda Nesimba
Danielle (iye / wake), 19, California
“Sezvandakagara muzvidzidzo zvangu zvebiology kekutanga, mwoyo wangu wakanyura. Ndakanga ndisingazivi kuti purofesa wangu aitaura nezvei uye zvaiita sokuti mumwe nomumwe wevezera rangu aizviitira.”